स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले दहीचिउरा कति लाभदायी ?
स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले दहीचिउरा कति लाभदायी ?
२०७६ असार १५ आइतबार १२:४३:००
आज असार १५ दही चिउरा खाने दिन । गर्मीमा धान रोप्दा पसिनाको माध्यमबाट जाने पानीलाई समेत यसले परिपूर्ति गर्ने भएकाले दही चिउरा खाने चलन बसाएको हुनुपर्छ हाम्रा पुर्खाहरुले । चिउरा कार्बोहाइड्रेडको स्रोत हो। दहीमा चिउरा मिसाएर खाँदा कार्बोहाइड्रेड, प्रोटिन, क्याल्सियम, पोटासियम र भिटामिन पर्याप्त मात्रामा प्राप्त गर्न सकिन्छ।
दहीचिउरा चाँडो तयार पार्न सकिने मिठो र पोषिलो खाजा भएकाले पनि कामको चाप भएका बेलाको खाना वा खाजाका रुपमा यसलाई रोजिएको हुनुपर्छ। दहीचिउरा खाँदा स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ। यो जुनसुकै उमेर समूहले पनि खान सक्छौं। जुन बेला पनि खान सकिन्छ।
यदि गुलियो बनाएर खाने हो भने पनि प्रकृतिक गुलियो सखर, खुदो मिसाइयो भने स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुन्छ।
हाम्रा विभिन्न पारम्परिक अचार अथवा तरकारीसँग दहीचिउरा खादा अझ पूरक र पोषिलो हुन्छ।
दहीका फाइदा – दहीले मांशपेसी र हाड बलियो बनाउन मद्दत गर्छ। – रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ। – दही बनाउने ल्याक्टोब्यासिलस ब्याक्टेरियाले पाचन प्रक्रियामा सहयोग पुग्छ। –दहीमा क्याल्सियम र मिनरल बढी मात्रामा पाइन्छ। – पेट गडबडी हुँदा अर्थात् पखाला लागेको समयमा दहीको सेवन गर्दा पखाला कम हुन्छ।
चिउराका फाइदा – चिउरा पकाउनु नपर्ने भएकाले हामीले जुनसुकै परिकारका साथ खान सकिन्छ। – प्रशस्त कार्बोहाइड्रेड भएकाले काम गर्न शक्ति प्रदान गर्छ। – फलामको ओखलमा कुटेको चिउरामा आइरनको मात्रा बढी हुन्छ।